Haddii aad jirato - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha > Haddii aad jirato
Haddii aad jirato ama uu shil kugu dhaco, waxaad xaq u leedahay inaad ka maqnaato shaqada. Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu waqtiga jirada mushaar kaa siiyo. Haddii aad jirrato, u sheeg madaxdaada qofka madaxda kuu ah.
Haddii adiga ama ilmaahada 16 sano kayar la geliyay gooni u hayn ama karaantiil sababtaas darteedna aadan shaqo u aadi karin, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay lacag maalmeedka cudurada faafa ee Kelada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan lacag maalmeedka cudurada faafa iyo kaalmooyinka kale ka aqri bogga Dhibaatooyinka dhaqaale.
Mushaarka wakhtiga jirrada
Haddii xiriirkaada shaqadu uu socday wax ka badan bil jirashada kahor, waxaad heleysaa muhaar buuxa ugu yaraan laga bilaabo maalinta jirashada iyo sagaal maalmood waqtiga maalinta jirashada ka dambeeya. Haddii taas kadib xitaa aadan ku noqon karin shaqada waxaad Kelada ka codsaneysaa lacag maalmeedka jirada (sairauspäiväraha), haddii aad ku jirto xeyndaabka caymiska jirashada ee Finland.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ammaanka bulshada Finnishka.
Waxaa laga yaabaa in heshiiska shuruurdaha shaqada shuruudo kale lagu heshiiyay islamarkaasna aad mushaar hesho waqti intaas ka dheer.
Shaqo-bixiyuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu kaa dalbado cadeynta dhaqtarka ee cadeyneysa inaad jirantahay. Haddii aad jirato oo aadan shaqada aadi karin, islamarkaasba ogeysii madaxdaada. Madaxdaada ayaa kuu sheegaya inaad u baahantahay cadeynta jirada ee dhaqtarka islamarkaas ama maalinta afaraad marka laga soo bilaabo maalinta jirashada.
Ku maqnaanshaha jiradu ma ahan fasax, waxaa loo ogaalaadaa ka soo raysashada jirada darteed, sidaas darteed bogsoonaanshahaada halis ma gelin kartid adigu.
Lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dalbashda lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii ilmo da'diisu ay ka yar tahay 10 sano uu si lama filaan ah u xanuunsado, hooyada ama aabuhu guriga ayey ilmaha la joogi karaan si ay u xannaaneeyaan. Fasaxa daryeelka carruurtu wuxuu ugu badnaan socon karaa afar maalmood. Heshiiska shuruudaha shaqada ayaa looga heshiiiyey in waqtigaas mushaar la helayo iyo inkale.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhri: Caafimaadka ilmaha.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 09.12.2021 Boggan war-celin ka soo dir